Xasuuqii aamusnaanta: Amerindiyaanka wuxuu ku hanjabay biyo xireen Amazon - AFRIKHEPRI
Hababka 101 ee lagu bedelayo noloshaada - Wayne Dyer (Audio)
Lwuxuu si weyn u leeyahay tamarta Faransiiska ee GDF Suez waxaa lagu eedeeyay todobaadkan inuu khatar galinayo nolosha Hindida Hindiya, oo ay ku jiraan tii Hindisaha Hindida ah ayaa aad u nugul.
GDF ayaa kaalin hoggaamineed ka gashay dhismaha biyo-xireenada ee Brazil waxaana si dhow ugu lug leh Jirau Mega Dam oo hadda dhismo ku leh webiga Madeira ee Galbeedka Amazon. Booskani hanjabaad dhul-ballaarankuwaas oo dad badan oo asaliga ah, oo ay ku jiraan kooxo kala duwan oo Hindi ah, waxay ku xiran yihiin noloshooda.
Maalintii shalay dadka reer Brazil ee india iyo taageerayaashooda ayaa lagu beegsaday shirkii guud ee shirkadaha shirkadda, iyaga oo ku boorriyay GDF inuu ka tago mashaariic burburinta dhismaha oo uu dhagaysto dadka Indiya, kuwaas oo aan si habboon loola tashan mashruuca. Jirau Dam.
Hogaamiye wadani ah Sônia Guajajara, oo horey u kulmay wakiillo ka socda GDF oo hoggaaminayay a dhacdo ee Paris, ayuu yiri: "Hawlaha GDF Suez waxay waxyeello u geystaan ​​deegaan, waxayna ka qaybqaataan burburinta codadka iyo dhaqamada dadka asaliga ah iyo dhaqanka ee Amazon".
ldhaqdhaqaaqa dadka asaliga ah ee Brazil iyo Isuduwidda Ururada asaliga ah ee Amazon ayaa warqad u diray madaxa shirkadda GDF Suez, Gérard Mestrallet, iyaga oo dhalleeceeyay ku xadgudubka shirkadda ee ku aaddan tilmaamaha u gaarka ah iyo sida ay uga go'an tahay heerarka Qaramada Midoobay. Mashruuca biyo-xireenka Jirau wuxuu kale oo ku xadgudbay dastuurka Brazil iyo Shirweynihii 169 ee Ururka Shaqaalaha Adduunka.
Christian Poirier oo ka socda ururka Amazon Watch, oo shalay soo bandhigay bandhigga, ayaa yiri: Dhaqdhaqaaqa wadaniga ah ee reer Brazil ayaa si xoogan u dhaleeceeyay dhaqan xumada iyo akhlaaqda xun ee hogaamiyaha dunidan. Banaanbaxa maanta ayaa ujeedadiisu tahay inuu farriinta u gudbiyo saamileyda GDF Suez oo ay tahay inay ka dalbadaan madaxda fulinta shirkadaha inay ixtiraamaan ballanqaadkooda anshaxeed. Laga bilaabo waddanka Faransiiska oo leh 36% saamiyada GDF Suez ”.
Waxaa jira ugu yaraan 77 koox oo Hindi ah oo go’doonsan oo ku nool Brazil. Iyagu waa dadka ugu nugul dalka. Badbaadinta waxay ku boorineysaa dowladda Brazil inay ilaashadaan dhulkooda si ay u adeegsadaan gaar ahaaneed maaddaama ay tahay habka keliya ee lagu dammaanad qaadi karo jiritaankooda.
Feker ahaanshaha Koobka Adduunka ee Koobka Adduunka, Badbaadinta ayaa soo saartay "wajiga qarsoon ee Brazil". Guji halkan si aad waxbadan uga ogaato xaalada Hindida reer Brazil iyo talaabada dowlada ee ku aadan xuquuqdooda dhul.
50 sano oo khaladaad juquraafiyeed ah oo ay sameeyeen hoggaamiyeyaasha Afrika
Waraaq ka socota Hugo Chavez oo u socota Afrika: "aan qabno hal dad, hal qaarad"
Muxuu ahaa aragtida ay dadka afrikaanka ahi naftooda ka qaateen ganacsiga addoonsiga?